बर्दियामा मेयर र अध्यक्षका आकांक्षीहरू दौडधुपमा; हेनुहोस् को को? | Bardiya Online
बर्दियामा मेयर र अध्यक्षका आकांक्षीहरू दौडधुपमा; हेनुहोस् को को?
भाबुक योगी/सुदीप अधिकारी | प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र १७, २०७३ ::: 10299 पटक पढिएको |
वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बर्दियामा चुनावी चर्चा सुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरू आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउन गाउँगाउँमा कार्यकर्ता भेलामा जुट्न थालेका छन् भने चोक, चौतारी र चिया पसलमा चुनावकै चर्चा सुरु भएको छ ।
चुनावी माहोलको चर्चा संगै संभावित उम्मेद्वारको चर्चा पनि सुरु भएको छ । जिल्लाका प्रमुख पार्टी कार्यालयहरूमा स्थानीय तहको चुनावमा नगरपालिकाको मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्षको टिकट कसले पाउने र कसलाई दिने भन्ने चर्चा पनि बाक्लो रूपमा हुन थालेको छ । पार्टी कार्यालयहरूमा दिनहुँ जसो टिकटका लागि बहस चलिरहेको छ । अहिले सम्म नगरपालिकाको मेयर गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि मात्रै चर्चा चलिरहेको छ । उपमेयर र वडा अध्यक्षको खासै चर्चा छैन । उपमेयर र वडाअध्यक्ष आ आफ्नै ढंगबाट मेयरका आकांक्षीहरुले रोज्न थालेको पाईएको छ । मेयरको आकाँक्षी राख्दै एमाले र कांग्रेसका केहीले फेसबुकमा आफ्नो फोटो सहित मेयरको आँकाक्षी देखाईरहेका छन् ।
नगरपालिकामा मेयर र गाउँपालिकामा अध्यक्षको टिकट कस्ले हात पार्ला भन्ने कौतूहलता पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । चुनावको टिकटका लागि नेता तथा कार्यकर्ताहरू दौडधुपमा छन् । दिनहुँजसो गाउँगाउँमा राजनितीक पार्टीका दलहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । दलका नेताहरू मुक्त कमैया र सुकुम्बासी बस्तीमा मत माग्न पुग्न पुगेका छन् । दलहरु कार्यकर्ता भेला गरेर गाउँगाउँमा चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन तीव्र रूपमा लागेका छन् । बर्दियामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले, राप्रपा लगायत पार्टीका आकांक्षीहरूले नगरपालिका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षका लागि अहिले आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न होडबाजी चलाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारका आकांक्षीहरू धेरै भएकाले सम्भावितको नाम समेत अहिले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । बर्दियाका अधिकाँस नगरपालिका नेकपा माओवादी केन्द्रमा आकांक्षीहरू धेरै नभएपनि कस्लाई दिने आन्तरिक छलफलमै रहेको छ । केही दिनपछि उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने तर अहिले तुरुन्तै भने नगर्ने माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष हिमाल शर्मा भन्नुभयो । कांग्रेस, माओबादी र एमालेले चैत मसान्त भित्र ढिलोमा बैशाख ७ गते भित्र मतदातालाई जानकारी हुने गरी उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरीसक्ने बताएका छन् ।
यता मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले भने जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा उम्मेदवार खडा गर्ने जनाएको छ भने मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल तमलोपा, सद्भावना पार्टी लगायतले मोर्चाको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने तमलोपाले जनाएको छ ।
बर्दियाका ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा एमालेकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यसअघि २०७० सालको दोस्रो संबिधान चुनावका आधारमा माओबादी केन्द्र ३ नगरपालिका र १ गाउँपालिकामा बलीयो रहेको चर्चा छ ।
यसैगरी एमाले १ नगरपालिका र १ गाउँपालिकामा बलियो भन्ने चर्चा छ भने २ नगरपालिकामा कांग्रेस बलियो रहेको चर्चा आईरहेको छ । तरपनि मुख्य गरी माओबादी, कांग्रेस र एमाले बिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यता स्थानिय स्तरमा मतदाताको अभिमत बुझ्दा पार्टी भन्दा पनि ब्यक्ति रोज्नु पर्ने भन्दै उम्मेदवारको नाम छिटो सार्वजनिक हासे भन्ने चाहना राखेको पाईएको छ ।
बर्दियामा २ लाख ५५ हजार जना मतदाता रहेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफ्नो काम दु्रत गतिमा अघि बढाइरहेको जिल्ला निर्बाचन कार्यालयका प्रमुख पवनकुमार शाहीले बताउनुभयो । स्थानीय तहको चुनावका लागि बर्दियामा १५४ मतदान स्थलमा ३ सय ५५ मतदान केन्द्र रहने छन् ।
मेयरको आकाँक्षी राख्दै एमाले र कांग्रेसका केहीले फेसबुकमा आफ्नो फोटो सहित मेयरको आँकाक्षी समेत देखाईरहेका छन् ।
बर्दियामा ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा को को छन् त आकांक्षीहरू अनि कस्को कती चर्चा छ ?
क्षेत्र नम्बर १ – बाँसगढी नगरपालिका
यस अघि क्षेत्र नम्बर १ रहेको ठाँउमा अहिले बाँसगढी नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका रहेका छन् । २०७० सालको चुनावमा एमाले बिजयी भएकाले पनि यहाँको एक नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा एमालेलाई बलियो मानिएको भएपनि कांग्रेस र एमाले बिच प्रतिप्रर्धा हुने देखिन्छ ।
यहाँ बाँसगढी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गंगाधर पौडेल, गोविन्द रेग्मी र बलिराम थारू मेयरका उम्मेदवार हुन सक्ने नाम चर्चामा छन् । नेकपा एमालेबाट शालिकराम अधिकारी, खडकबहादुर खड्का, सुन्दर ढकाल, पूर्ण अधिकारी र नैनबहादुर खत्री को नाम चर्चामा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बिनयराम थारु (बिकल्प) नरेन्द्र पराजुली उम्मेदवार हुने चर्चा छ । भने राप्रपाबाट रामचरण चौधरीको नाम चर्चामा छ ।
क्षेत्र नम्बर १ – बढैया गाउँपालिका
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भुवनेश्वर थारू, हरिहर चौधरी, मानबहादुर वली, टुकराज घिमिरे, शान्ति अधिकारी, नेत्रबहादुर रानाभाट र घनश्याम घिमिरे को नाम चर्चामा छ । नेकपा एमालेबाट लालबहादुर श्रेष्ठ, डिल्ली गौतम, दिलबहादुर केसी र कौशिला सिंहको नाम चर्चामा छ । यसैगरी माओबादी केन्द्रबाट बिस्तार थापा, प्रमोद चौधरी र लल्लु चौधरीको नाम चर्चामा छ । राप्रपाबाट बरातीलाल थारू, रमेश थारू र सोमनाथ पौडेलको चर्चामा छ । यस गाउँपालिकामा एमाले बलियो भनिएपनि कांग्रेस र एमाले बिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यो गाँउपालिका चार वटा साबिकका गाविस मिलेर बनेको हो ।
क्षेत्र नम्बर २ – गुलरीया नगरपालिका
बर्दियाको सदरमुकाम रहेको नगरपालिका हो गुलरीया नगरपालिका । यस अघि क्षेत्र नम्बर २ रहेको ठाँउमा अहिले गुलरीया नगरपालिका र बाह्रबर्दिया नगरपालिका रहेका छन् । २०७० सालको चुनावमा कांग्रेस बिजयी भएपनि यहाँको दुबै नगरपालिकामा काँग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्र बिच कडा प्रतिप्रर्धा हुने देखिन्छ ।
यहाँ गुलरीया नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट विजय देवकोटा, मुक्तिनाथ यादव (किट्टु), राधेश्याम थारू, कैलाश अधिकारी, महेन्द्र गिरी, युवराज श्रेष्ठ, सुधांशु शर्मा र राजकुमार श्रीवास्तव मेयरका उम्मेदवार हुन सक्ने नाम चर्चामा छन् । एमालेबाट हरि ज्ञवाली, बालकृष्ण ओली, अमरबहादुर खड्का र रामबहादुर रावलको नाम मेयरका लागि चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रबाट मिथीला फुँयाल मेयरको उम्मेदवार हुने चर्चा छ । राप्रपाबाट मनोज कुमार बर्मा, मग्रे गोडिया र मेघनाथ अधिकारीको नाम चर्चामा छ ।
क्षेत्र नम्बर २- बाह्रबर्दिया नगरपालिका
नेपाली कांग्रेसबाट मोहनलाल थारू र प्रशुराम थारूको नाम मेयरका उम्मेदवारका लागि चर्चामा छ । एमालेबाट रामबहादुर थारू, पतिराम थारू, मनिराम ज्ञवाली, पदम ढकाल, भक्तबहादुर र कमला ज्ञवालीको नाम चर्चामा छ । यसैगरी माओबादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद थारु (कबिर) र चुनबुदिया थारु (अन्जु) को नाम चर्चामा छ । राप्रपाबाट हरिचन्द्र शाह, सुमित्रा शर्मा र रामप्रसाद थारू चर्चामा रहेका छन् । यस नगरपालिकामा मओबादी बलियो भनिएपनि माओबादी, कांग्रेस र एमाले बिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यो नगरपालिका चार वटा साबिकका गाविस मिलेर बनेको हो ।
क्षेत्र नम्बर ३ – ठाकुरबाबा नगरपालिका
यस अघि क्षेत्र नम्बर ३ रहेको ठाँउमा अहिले ठाकुरबाबा नगरपालिका र मधुवन नगरपालिका रहेका छन् । २०७० सालको चुनावमा माओबादी बिजयी भएकाले पनि यहाँको दुबै नगरपालिकामा माओबादी केन्द्रलाई बलियो मानिएको भएपनि माओबादी, कांग्रेस र एमाले बिच प्रतिप्रर्धा देखिन्छ ।
यहाँ ठाकुरबाबा नगरपालिकामा कांग्रेसबाट विद्याप्रसाद खनाल, मक्कुराम चौधरी, नवराज न्यौपाने, तिलक लम्साल, वेदप्रसाद भण्डारी र नन्दराम तिमिल्सेना, सिताराम बिष्ट र छबीलाल सापकोटाको नाम चर्चामा छ । तर मेयरमा बिद्या प्रसाद खनाल वा मक्कुराम चौधरी नै उठने चर्चा चलेको छ । विद्याप्रसाद कांग्रेस महासमिती सदस्य हुन भने मक्कुराम जिल्ला कार्य समिति सचिव हुन । नागरिकमा भिजेका नेता भएकोले दुई मध्ये जस्ले टिकट पाएपनि चुनाव जित्न सजिलो हुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
एमालेबाट लहानु थारू, घननारायण श्रेष्ठ, खगेन्द्र खनाल, भिख्खु थारू, जीवन शाही र चन्द्रमणी पौडेलको नाम चर्चामा छ । लहानु थारू वा घननारायण श्रेष्ठले मेयरको टिकट पाउन सक्छन भन्ने धेरैको आँकलन छ । दुबै जना नागरिकमा भिजेका नेता हुन । माओवादी केन्द्रबाट आस्था कुष्मा थारु र नेत्रराज आचार्यको चर्चा गरिन्छ । आस्था कुष्मा थारु वा नेत्र आचार्य कस्ले मेयरको टिकट पाउँछ अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । नेत्र सामाजिक काममा अग्रपंतीमा पर्छन भने आस्था पार्टीका लागि त्यागी मानिन्छीन त्यसैले दुबै जना पार्टीका बलिया उम्मेदवार हुन् । त्यस्तै राप्रपाबाट युवराज शाह र अरुणप्रताप सिंहको नाम चर्चामा छ ।
अघिल्ला चुनावको मत परिमाण हेर्दा यो नगरपालिका क्षेत्रमा माओबादीलाई बलियो शक्ति मानिन्छ । तर कांग्रेस, माओवादी र एमालेको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । २०७० सालको परिणाम अनुसार यस क्षेत्रमा माओबादी बलियो भएपनि चार गाविस मिलेर बनेको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा कांग्रेसका मतदाता पनि धेरै रहेको अनुमान छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी छुट्टा छुट्टै लडेमा माओबादी र कांग्रेसको मत बढी आउन सक्छ । तर यीनमा माओवादीसंग तालमेल गर्ने चर्चा समेत चलेको छ ।
क्षेत्र नम्बर ३ – मधुवन नगरपालिका
यहाँ मधुवन नगरपालिकामा कांग्रेसबाट बलिराम थारू, प्रेमबहादुर गुरुङ, तेज बहादुर भाट, उदय लम्साल, जग्गाप्रसाद पाण्डे, मेघबहादुर गुरुङ्ग , शुरेश योगी र गोपाल पौडेलको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट दुर्गा वली, कुलप्रसाद पोख्रेल, टंक पौडेल र टंक वलीको नाम चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रबाट गणेश केशी र हरीहर चौधरीको चर्चा गरिन्छ ।
त्यस्तै राप्रपाबाट प्रेमबहादुर डाँगी, नरेशजंग शाह र भूमिदत्त शर्माको नाम चर्चामा छ । अघिल्ला चुनावको मत परिमाण हेर्दा यो नगरपालिकामा माओबादीलाई बलियो शक्ति मानिन्छ । तर अहिले कांग्रेस, माओवादी र एमालेको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो नगरपालिका चार वटा साबिकका गाविस मिलेर बनेको हो ।
क्षेत्र नम्बर ४ – राजापुर नगरपालिका
जिल्लाको अर्को नगरपालिका राजापुर नगरपालिका हो । यस अघि क्षेत्र नम्बर ४ रहेको ठाँउमा अहिले राजापुर नगपालिका र गेरुवा गाउँपालिका रहेका छन् । २०७० सालको चुनावमा माओबादी बिजयी भएकाले पनि एक नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा माओबादी केन्द्रलाई बलियो मानिएको भएपनि माओबादी, कांग्रेस र एमाले बिच प्रतिप्रर्धा हुने देखिन्छ ।
यहाँ राजापुर नगरपालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट दीपकजंग शाह र रमण रेग्मी मुख्य दाबेदारका रूपमा देखा परेका छन् । त्यस्तै इन्द्र सेन, पहारी थारू र सरमा थारू एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारको रूपमा देखापरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट दिपेश थारु (राजेश) र शिवप्रसाद थारु (प्रतिक) को नाम चर्चामा छ । राप्रपाबाट जीवराज रेग्मी, सन्तराम थारू, राममणि उपाध्याय र केशर बहादुर थापाको नाम चर्चामा छ । अघिल्ला चुनावको मत परिमाण हेर्दा यो नगरपालिकामा अहिले कांग्रेस र माओबादी बिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
क्षेत्र नम्बर ४ – गेरुवा गाउँपालिका
कांग्रेसबाट कमलप्रसाद रेग्मी, जमानसिंह केसी, प्रेम रावल र आलोक चौधरीको नाम गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि चर्चामा रहेको छ । एमालेबाट नुतन चौधरी, सीतामैया शाही र लालबहादुर कडायतको नाम चर्चामा छ भने माओबादी केन्द्रबाट बेहगराज थारु (अजित) र बिश्वराज थारु (शिशीर) को नाम चर्चामा रहेको छ ।
-मिती शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ मा अध्यावधिक गरिएको ।